N'ogbe Multi-Fighter 13.3 inch Kọmputa shelf Label ESL emeputa na soplaya | Zokong
-Name: Multicolor 13.3 anụ ọhịa Electronic shelf Label ESL
-Ọzọ Nke ozo: 1.54 ″, 2.13 ″, 2.6 ″, 2.7 ″, 2.9 ″, 4.2 ″, 7.5 ″ 11.6 ″
-Display: ọcha, nwa, ọbara ọbara, odo, Blue, Green, odo odo wdg
Igwe ojii Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe ojii
Nrụgide ụlọ ahịa na-arị elu mgbe niile. N'ihi na ọ dị mkpa ka kwekọọ ọnụ ahịa e-commerce na ọnụahịa mkpọsa, a na-achụ teknụzụ ọhụrụ. Uru nke njikwa ọnụahịa dị ike na nke zuru oke ma na-ebelata ọrụ ọrụ doro anya. Nwere ike ịhazie ọnụahịa dịka ndị asọmpi gị ma ọ bụ zụlite omume ịzụ ahịa pụrụ iche.
Circustantial ịnye ọnụahịa abụghị a futuristic emekarị ma eziokwu. Ndị ahịa na-enweta ọnụahịa dị iche iche na-enyekarị onyinye otu ụzọ dị iche iche. Nke a na-akpọ maka ngwaọrụ iji jikwaa ma dezie ọtụtụ nke ọwa ndị ahụ. Ọzọkwa, sistemụ anyị na-enye n'ezie, ịchekwa oge yana njikarịcha akụ. Manual price mgbanwe bụ oge na akụ na-ewe n'agbanyeghị n'agbanyeghị na ọ bụ a nnukwu enterprise, ụgbọ ala na-ere ahịa, ụlọ ahịa, ejiji ụlọ ahịa ma ọ bụ obere azụmahịa. Nye onwe gị ike ịhazigharị ihe ndị ahụ. Mgbanwe ọnụahịa ọnụahịa ọnụahịa nke ụlọ ọrụ elektrọnik ugbu a bụ okwu nke nkeji karịa awa.
E-azụmahịa na-eme ka nrụgide asọmpi na-arịwanye elu na ndị na-ere ahịa na-eduga na nhazigharị ọnụahịa ugboro ugboro. Igosiputa ugbua ihe mgbe ochie gha eme ka anyi ghara inwe ntụkwasị obi n’ebe ndi ahia no, nke onye nwe ahia n’enweghi ike inye aka na aku na uba taa. Eletriki ego na mkpado na-enye ohere iji gboo mkpa ndị a na mgbanwe, nrụpụta ọrụ na nkenke. Gbanwe mkpado ụgwọ akwụkwọ ọdịnala na-ewe ihe dị ka nkeji 3, nke na-agbakwunye ngwa ngwa ruo ọtụtụ awa ọrụ maka ụlọ ahịa dum. N'akụkụ iji nwayọọ na-emejupụta ọnụahịa, ọnụ ahịa na-arịwanye elu na nke puru omume njehie dị elu, akara mkpado akwụkwọ nwekwara ike ibute nnukwu mbibi. N'ihi nzaghachi dị mkpirikpi, enwere ike imelite akara ngosi oge n'oge awa azụmahịa na-enweghị ihe egwu na adịghị mma nke shelf na ego ndekọ ego nke na-ebelata mkpesa.
Ka anyi jiri onu ahia dijitalya dozie nsogbu nile nke mkpado akwukwo di iche-iche nwere.
Nke gara aga: Multicolor 5.8 anụ ọhịa Electronic shelf Label ESL